Assistive Touch for Android အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ကိရိယာများ » Assistive Touch for Android
ကိရိယာများ | 8.0MB
အသိပေးချက် - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမျက်နှာပြင်အသံဖမ်းစက်, Power Popup ကဲ့သို့သောကြိုတင်လည်ပတ်မှုအသစ်သည်အသစ်သော software version 5.0 ကိုသာထောက်ပံ့သည်။ သင်၏ဖုန်းထိုးမပံ့ပိုးမှုမပေးပါက ကျေးဇူးပြု. မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပေးပါနှင့်။ သင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါဟာမြန်မြန်ပါပဲ, ချောချောမွေ့မွေ့ပါ, မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ floating panel ဖြင့်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်, သင်အကြိုက်ဆုံးအက်ပ်များ, ဂိမ်းများ, ချိန်ညှိချက်များနှင့်လျင်မြန်စွာ toggle အားလုံးကိုလျင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။ Smart Clean Function ကို အသုံးပြု. သင်၏နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်, သင့်ဖုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကူညီနိုင်သည်။ အထောက်အကူကောင်းသောထိတွေ့မှုသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ (Home ခလုတ်နှင့် volume ခလုတ်) ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံး app လည်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Lock Screen နှင့် Lock Volume ကိုဖွင့်ရန် ခလုတ်ကိုပြောင်းရန်အမြန်ထိတွေ့မှုအသံကိုပြောင်းရန်အမြန်ထိတွေ့ခြင်းအသံ mode ကိုပြောင်းလဲရန် - Virtual Back Button
- Clean Back Button, contr ထိတွေ့မှုနှင့်အတူအလွန်လျင်မြန်သော setting
Quick Touch Setting တွင်:
- Power Popup (5.0 နှင့်တက်)
> - Open Notification
- တည်နေရာ (GPS)
- Ring Mode (ပုံမှန် mode, တုန်ခါမှု, တုန်ခါမှု, အသံတိတ် Mode)
မျက်နှာပြင်လှည့ ်. & Down
- လက်နှိပ်ဓာတ်မီးရောင်ခြည် - သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ application များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများအားလုံးကိုဖွင့်ပါ။ ★
Ram Booster - စင်ကြယ်သောမှတ်ဉာဏ်
ဖုန်း, Memory (RAM) အခမဲ့အခမဲ့ (RAM), သင်၏ device ကိုမြန်အောင်လုပ်ပြီးဘက်ထရီကိုသိမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 1 ကိုအသာပုတ်ပါ။ သင်၏မူလမြင်ကွင်းမှတိုက်ရိုက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရန်လွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်မလိုအပ်သောအပလီကေးရှင်းများဖွင့်ထားသော app များနှင့်မိတ္တူကူးသော app များကိုရှင်းလင်းရန်အပြည့်အ0ဖွဲ့စည်းရန်အပြည့်အဝအာနိသင်နှင့်အပြည့်အဝပါ0င်သည်။
သင့်ရဲ့ lollipop ၏မျက်နှာပြင်။ ၎င်းတွင် root access, အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိ, ရေစာမလုံလောက်ပါ,
- မျက်နှာပြင် Recorder သည်သင်၏မျက်နှာပြင်ကို HD နှင့် FullHD ဗီဒီယိုများသို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ အသံကို MIC မှမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုဗီဒီယိုများထဲသို့အလိုအလျောက်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်ခန်းစာ, မြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုကိုဖန်တီးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်, သင်၏ဂိမ်းနှင့်ဂိမ်းများနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုချက်တင်စကားမှတ်ချက်ပေးရန်။
၎င်းသည်ဘက်ထရီကိုသိမ်းဆည်းသည် ကိရိယာသည် OLED သို့မဟုတ် AMOLED မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုသည်။
- အဖြူရောင်နောက်ခံရှိအမှောင်စာသားသည်အနိမ့်အလင်းအခြေအနေများတွင်မျက်စိ strain ကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်အမှောင် mode သည် ပို. ကောင်းသည်။ မျက်နှာပြင်အမှောင်မိုက်စွာဖြင့်ဖန်သားပြင်အလင်းရောင်လျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှတောက်ပသောအရောင်များကိုလျှော့ချသည်။
- သင်ဟာအထောက်အကူပြုထိတွေ့မှု၏အိုင်ကွန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီး Floating ခလုတ်အတွက် Gesture Setting (Tap Tap ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ, နှစ်ချက်နှိပ်ပါ)
- သင်ကအထောက်အကူပြုထိတွေ့မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့အားကြယ်5ပွင့်ပါက ကျေးဇူးပြု. ဤ app တွင်ပြ problem နာရှိလျှင်သင်၏ပြ problem နာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည် သင်တောင်းဆိုမှုအသစ်, အရောင်သို့မဟုတ် function အသစ်ပို့လိုပါက
1 ။ မေးပါ - ဒီ app ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ။ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ https://youtu.bebe/v8Y7gk2qg_e
- ဤအထောက်အကူပြုထိတွေ့မှုကိုသင်ဖယ်ထုတ်လိုပါက App ကိုဖွင့်ပြီး settall ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
မေး။ ။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ဘာကြောင့်ဖန်သားပြင်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့် function မဟုတ်သနည်း။
ဒီအက်ပ်က device administrator ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုသုံးတယ်။
ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်လက်လှမ်းမီနိုင်သော0န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
- Read_Phone_State သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်ဖုန်း၏ပြည်နယ်ကိုသာနားထောင်ပါ။
- Bind_Device_admin ကို Lock function ကိုသာအသုံးပြုသည်။
- ဘဏ္ financial ာရေးသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိုးရမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ, > သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်